Doomaha quraaradda | Kalluunka
Qoolleydu sidoo kale waxay qayb ka noqon karaan aquarium-keena. Way qosol badan yihiin mararka qaarkoodna waxaan u danqanaynaa inaan iyaga ka iibsanno wax ka badan xiisaha aan u qabno. Laakiin maahan inay sidaas noqoto haddii aan go'aansano inaan helno qoolley ma hilmaami karno inay tahay noole yoolkeenuna yahay inaan daryeelno oo aan sii noolaano.
Meeshaan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo la xiriira qoolleyda si ay ula qabsadaan gurigeenna, arrimaha heerkulka iyo faahfaahinta kale sida cuntada, noocyada biyaha, dhirta ama qalabka ay jecel yihiin.
Ha iloobin in macluumaadku yahay awood oo waa inaan ku raaxaysanaa si xoolaheennu ugu fiicnaadaan inta ugu macquulsan gurigeenna. Iyo wixii ka sarreeya oo dhan Waa inaanan ilaawin hadii ay dhacdo inaanan kaqeyb qaadan karin mustaqbalkana kuma tuuri karno biyaha webiyada iyadoon waxbadan laqabsanSababtoo ah qofku waxba ma qaban doono, laakiin haddii qof walbaa sidaas oo kale sameeyo, markaa dhibaato ayay noqoneysaa.
Indho la'aanta Qoolleyda
Cudurrada ugu badan ee ay xayawaanadan ku dhici karaan waxaa sababa cilladaha deegaanka, kuwaasoo ...
Talooyin ku saabsan guri ku noolaanshaha guriga
Dad badan, halkii ay ka ahaan lahaayeen eeyo, bisado ama noocyo kale oo xayawaan guriyeed ah, waxay doorbidaan inay guryo ku leeyihiin guryo, tan iyo ...
Sida aan wada ogsoonahay, ama uguyaraanba ogaanayno, xayawaan yar ayaa xasilloonida iyo samirka leh ...